Inspiration - fironana amin'ny haitao GIS - ESRI UC andro voalohany - Geofumadas
Jolay, 2015 ArcGIS-ESRI, jeospatial - GIS, Fialam-boly / fitaomam-panahy
Ny 2005 no fotoana voalohany nanatrehako ny Konferansa ho an'ny mpampiasa ESRI, tao amin'io toerana io ihany: ny San Diego Convention Center, miaraka amin'ireo sora-baventy lehibe mihantona eo amin'ireo tohanan'ilay lalantsara vita amin'ny vera lava. Mitsofoka anaty arabo volombava lava sy palitao fotsy, brunette avy amin'ny kaontinanta afrikanina miaraka amina tsiky katsaka ary mitokana Hispanika nanantena ny tsy hilatsaka mba haka selfie vaovao hiseho amin'ny tarehy.
Zavatra telo no tsaroako tsara tamin'io daty io, izay tena 10 taona lasa izay:
1. Ahiana ny fiainana.
Ny dingana tsirairay amin'ny androntsika dia mitondra ny fanahiany, ny fahafaham-po ary ny fianarany manokana. Tsaroako ireo andro izay, rehefa 80 kilaometatra avy teo an-trano ny asako, dia nitsambikina tamim-pifaliana ny zanako lahy ary nitady ny baolina rehefa naheno ahy tonga ny zoma alina, raha ny zanako vavy, vao roa taona monja, dia nibanjina ahy tamin'ny masony be nanontany tena hoe iza io dadatoako io izay nanjavona ny sisa tamin'ny herinandro.
Ny taona hafa dia alefa any amin'ny Oniversite ny zanako lahy, ary ny zanako vavy dia tsy manazava fanazavana bebe kokoa noho io tsikera io mba hampitandrina ahy amin'ny tahotra tsy mbola niainako.
Toy izany ny fiainana manaitaitra. Tsaroako fa tamin'io taona io dia nandeha voalohany tany amin'ny ESRI Conference an'ny mpampiasa aho. Fitsangatsanganana faharoa nataoko tany Etazonia io ary nandalo krizy natahorana izahay tao amin'ilay tetikasa nahatafiditra ahy. Nandoa anay izy ireo fa tsy fantatray hoe volana inona izany satria notaritarihin'izy ireo tahaka ny telo volana izahay ary ny mpamatsy carte de crédit dia nametraka anay tao amin'ny lisitra ho an'ny Birao foibe risika. Ka ny alatsinainy iray dia tsy maintsy nampindramin'i Raúl 50 peso aho mba hividianana sakafo antoandro ary handray ny bus mankany Tegucigalpa hitady ny saran-dalany.
Ny tolakandron'ny andro manaraka dia nihinana sakafo matsiro malefaka aho tao amin'ny Restaurant Restaurant de Embarcadero de San Diego.
2. Eo amin'ny vahoaka ny fitaomam-panahy.
Manentana ny fanahy eo am-pon'ny olona 35,000, ao amin'ny efitrano malalaky ny efijery mirindra mba hahitana habe azo ekena izay zara raha hita amin'ny sehatra lavitra. Saingy tsy noho ny tontolo iainana, fa noho ny olona. Ny fahitana an'i Jack Dangermond nanolotra ny fiainany, nahatonga ahy hanova ny saiko momba ny fitsipiky ny sekta misy ahy eo amin'ny marika iray sy marika iray hafa, eo anelanelan'ny tompona sy ny loharano misokatra izay tsy nipoitra firy tamin'ireny taona ireny.
Mety tsy hitovy hevitra amin'ny zavatra maro isika, saingy tsy tokony hohadinointsika fa ny orinasa toa an'io habe io dia nanangana ny tsena izay iarahan'ny Free Code miaraka amin'ny boaty mihidy. Mba hanaporofoana fa izy ireo no nitondra ny fahaizan'ny gurus ho an'ny besinimaro, ny fahasarotan'ny laboratoara geodesy izay zara raha azoko, ho an'ireo olona mankafy azy io eo an-tanany, eo anelanelan'ny fanamavoana ny fahalalana ao ambadika sy ny firaisana amin'ny fanokafana varavarana ho antsika. izay miaina amin'ny tontolon'ny jeografia.
Tena nampientam-po tokoa ny nahita ny antontam-boninkazo miaraka amn'akony tsy miova, toy ny endrika mivelatra amin'ny Anglisy ao amin'ny Infraestructure Inspired any London, toy ny faribolana maizina eo ambanin'ny mason'ireo gvSIG Free Days. Tafahoatra amin'ny fihetsika, saingy mifanaraka amin'ny refy amin'ny aingam-panahy amin'ny zavatra ataon'izy ireo, eo anelanelan'ny fifangaroana amin'ilay sarotra sy ny zavatra azo ampiharina izay toa ampahany amin'ilay soratra am-pitondran-tena izay tsy afaka maneho ny heviny akory.
Ny fahatsiarovako azy dieny izao dia manome ahy fangirifiriana, mahita ny dera sy fanantenana ny fifaninanana fanavaozana. Izy rehetra dia mitovy, aingam-panahy avy amin'ny Be Award tamin'ireny taona ireny, ary tamin'ny European Challenge izay azon'ireo gvSIG ankehitriny. Royal!
Nahita azy indray aho indray andro tamim-pahamendrehana, rehefa tonga tany amin'ny fireneko i Hugo Chavez nanompa ny mpandraharaha teo afovoan'ny Kianja filoham-pirenena. Ny fiainana no nahatonga ahy tsy hino ny ankamaroan'ny zavatra nolazainy intsony, tsy noho ny foto-pisainana fa noho ny traikefa niainana. Saingy zazalahy, gaga aho fa tena nahazo aingam-panahy tamin'ny heviny aho, tsy misy ifandraisany amin'ireo sarin'ireo revolisionera avy amin'ny fireneko sisa tavela nanao kapaoty Fidel Castro maitso ary nanao lobaka Che Guevara. Ity tolakandro ity dia lesona iray amin'ny tsy fanajana ny zon'ny ankavanana sy seza manome aingam-panahy ho an'ny fisandohan'ireo izay mino fa eo amin'ny ilany ankavia izy ireo.
Ny aingam-panahy dia ao amin'ny vahoaka ..
3. Ny tsiambaratelo dia mamantatra hoe aiza no misy.
Fa raha misy zavatra ianaranao avy amin'ny fotoana iray amin'ny hetsika toy ny ESRI Conference an'ny mpampiasa, dia ny fahafantarana ny fandehan'ny raharaha. Amin'ireto fihaonambe ireto dia tsy hianatra fika vaovao ianao, tsy misy fotoana hanaovana famerenana miadana amin'ny fametraham-panontaniana, mainka raha toa ka avy amin'ny sehatra Hispanika isika ka aleontsika mahatakatra ilay hafatra toy izay handany fotoana amin'ny fandikan-teny amin'ny rantsantanana. Fantatra amin'ny flash fa hitranga afaka roa taona ho avy, tsy amin'ny rindrambaiko tiantsika ihany, fa amin'ny lamina iray izay tsy azo ovaina eo amin'ny tsena manerantany.
Rehefa miverina amin'ny taninao ianao dia azo atao ny mankafy fiarahamonina mitovy amin'ny endrika kely indrindra; eo anelanelan'ny vazivazy homophobika an'i Raúl, ny tsiro hafahafa nataon'i Chamaco momba an'i Rock Crunch, ny fahaizan'i Jorge, ny mason'i Melissa, ny endrik'i Manuel, ny fihodinan'ny volana an'i Wilson, ny habakabaka nataon'i Bárcenas. Izay tontolo sarotra atao matotra ary misy hehy hafa tsy maharary mihitsy. Eo, tsy tsapantsika izany, ny fahaiza-misaina dia mitarika antsika hanomana ny làlana ho an'ny fironana hitantsika; fantaro fa ny zavatra hita any Etazonia dia hitranga eto afaka dimy taona, fa izay hita any Espana dia mety maharitra telo taona, ary izay hita tany Munich dia tsy mety hitranga eto mihitsy.
Saingy eo no misy ireo puffs, miainga avy amin'ny maodely UML astral mankany amin'ireo dingana fototra iasan'ny governemanta monisipaly. Ireo izay tsy azo entina any amin'ny GIS raha tsy mahavita CAD tsara izy ireo, izay tsy miraharaha firy ny 3D GML raha toa ny lafiny iorenany mba hiadiana amin'ny fanalavirana hetra avy any ivelany ary tsy hosaronan'ny kolikoly avy ao anatiny; any, izay tsy ahitan'izy ireo liana firy amin'ny WFS-T raha ny atahoran'izy ireo dia ny fitsarana ambony momba ny kaonty ka hampiakatra ny lisitry ny andraikitra satria tsy nampihatra ny soatoavina cadastral nifanarahana nandritra ny dimy taona lasa.
Marina izany, ny Konferansa ho an'ny mpampiasa ESRI dia tsy tokony hiteraka adin-tsaina ho an'ny fanatika marika iray, na fanilikilihana an'i Taliban loharano misokatra. Hetsika entanentanana amin'ny saina tsy miangatra, hijery izay alehan'ny raharaha, ny antsasak'izy ireo dia nalaina tahaka avy amin'ny hevitra lozisialy maimaim-poana, satria ny antsasany hafa amin'ity lafiny ity dia teraka teo.
Ary araka ny aseho, avelako ny horonan-tsary 5 momba ny tsara indrindra azonay tany San Diego androany.
Ny GIS manerana izao tontolo izao. 1 ampahany
Sarin'ny Map Map
Big Data & GeoAnalytic
Hizaha horonantsary bebe kokoa
Previous Post«Previous Fampaherezana sarobidy ho an'ny gvSIG - The Europa Challenge Award
Next Post 20 Dingana iray hananganana tanàna iray avy amin'ny scratchmanaraka »